Big City Small World (Series 1 Episode 11 - I'm an architect!) - Myanmar Network
Posted by Myanmar Network on October 19, 2012 at 10:18 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Series 1 Episode 11 - I'm an architect! (အတွဲ (၁)၊ အပိုင်း (၁၁) - ငါက ဗိသုကာပညာရှင်!)
Series 1 Episode 11 - I'm an architect! ( < အသံဖိုင် download ရယူရန် ဝဲဖက်မှ link ကိုနှိပ်ပါ)
Magda receives the result of her job interview, whilst Sarah continues to have problems with her house
Magda သည် သူ၏လူတွေ့စစ်ဆေးပွဲရလဒ်ကို လက်ခံရရှိခိုက်တွင် Sarah သည် သူ၏အိမ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြဿနာများ တွေ့နေသည်။
(ဖုန်းပြောနေသည်) ဆိုတော့...အိုကေ... အင်... ဟုတ်ကဲ့! သတင်းကောင်းပဲ!
ဟေး! ကောင်းလိုက်တာ! တော်တယ်!!
အမြဲတမ်း “ဒါပေမယ့်” ချည်းပဲ…
အဲ့ဒါ အစမ်းခန့်ပဲရှိသေးတာ… တစ်လပါပဲ။
အဆင်ပြေတယ်လေ၊ အဲ့ဒါ များသောအားဖြင့် ပုံမှန်ပါပဲ၊ ကုမ္ပဏီအများစုက လုပ်တတ်ကြတယ်။
အင်း ဟုတ်တယ်လေ၊ လခကတော့ မဆိုးပါဘူး။ အလုပ်သင်မှမဟုတ်တာ။
ငါ အလုပ်သင်အဖြစ်နှစ်နဲ့ချီပြီး လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်။ တစ်လလောက်တော့ အတွေ့အကြုံရအောင် လုပ်ရတာပဲ ­ လခတော့ မရဘူးလေ! ပြီးတော့ အဆုံးသတ်မှာ အလုပ်လည်းမရဘူး။ အခုလိုပဲပေါ့! ငါက Johnny ရဲ့ ကုမ္ပဏီအတွက် အလုပ်လုပ်ပေးနေရတယ် – စနေ၊ တနင်္ဂနွေ မှာတောင် အလုပ်ဆင်းစေချင်နေတယ် – ပိုက်ဆံကျတော့ အပိုမပေးဘူး!
ငါဘာလုပ်ရမှန်းကို မသိတော့ဘူး… ငါကတော့ ဟင့်အင်း လို့ပြောလိုက်ချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် ငါအလုပ်ပြုတ်မှာလဲ ကြောက်တယ်…
နင် သေသေချာချာ စဉ်းစား ရလိမ့်မယ်!
ဒါမှမဟုတ် နင်အလုပ်သင်ပဲပြန်လုပ်ဖို့ ကြိုးစားပေါ့!!! စတာပါဟာ! အတွေ့အကြုံ လိုချင်တယ် ဆိုရင် ၊ အလုပ်သင်လုပ်ဖို့ ကအရေးကြီးတယ်၊ နင့်ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်မှာ ဖြည့်ဖို့ပေါ့…
အင်း၊ နင်ပြောတာတော့ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ငါက အဲ့ဒီအဆင့်ကို ကျော်လွန်လာပြီလေ... အခု ငါ့မှာ အတွေ့အကြုံတွေ အများကြီးရှိနေပြီ။
ငါကတော့ င့ါရဲ့ ပထမဦးဆုံးနေ့အတွက် အရမ်းစိုးရိမ်နေတယ်။ အရမ်းကြောက်တာပဲ။ ငါဆိုးရွားရင် ဆိုးရွားလိမ့်မယ်!
စိတ်မပူုပါနဲ့ Magda ရယ်။ နင်ကကောင်းမှာပါ။ ပထမလမှာ နင်ဘယ်လောက်တော်တယ်ဆိုတာကို ပြလိုက် ပြီးရင် ဒုတိယလမှာ သူတို့နင့်ကို ပိုက်ဆံပိုပေးလိမ့်မယ်!
အများစုကတော့ ရုံးအလုပ်တွေပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ လူကြီးတွေနဲ့ ဒီဇိုင်းတချို့ မှာ တွဲလုပ်ခွင့်တော့ရပါရဲ့။
ကောင်းတာပေါ့... နင်ဘာလုပ်လဲ ဆိုတာ နောက်ထပ်တစ်ခေါက်လောက်?
Harry! နင်ဘယ်လိုဖြစ်လို့ အဲ့ဒါကို အမြဲမေ့နေတာလဲ?
ဗိသုကာပညာလေ! ငါက ဗိသုကာပညာရှင်! ငါ အဆောက်အဦးတွေကို ပုံစံဆွဲပေးတယ်!
အို အင်း၊ မှန်တယ်။ ဟုတ်တာပေါ့...
Sarah: She’sagood one too, Harry – I’ve seen some of her drawings. I keep on telling her that she should go to China – there are lots of opportunities there at the moment.
ပြီးတော့ Harry၊ သူမက တော်တယ် – ငါသူ့ရဲ့  ပုံအချို့ ကို ကြည့်ဖူးတယ်။ ငါသူ့ကို အမြဲတမ်း တရုတ်ပြည်ကို သွားဖို့ပြောတယ် – လက်ရှိအချိန်မှာ အဲ့ဒီမှာ အခွင့်အရေးတွေ အများကြီးရှိတယ်လေ။
တစ်နေ့နေ့ပေါ့။ အဲ့ဒါက စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမှာပါ... အခြေအနေဘယ်လိုလဲ Sarah?
မဟုတ်သေးပါဘူး။ နင်ခုမှ ပြောင်းတာလေ !
ငါကတော့ တိုက်ခန်းက ကောင်းတယ်ထင်တာ...
တိုက်ခန်းက ကောင်းပါတယ်၊ ပြဿနာက ပိုင်ရှင်ဟ။
Fadi ရဲ့  အစ်ကို ၀မ်းကွဲမဟုတ်လား?
ဟုတ်တယ်လေ... ဒါပေမယ့်သူက တကယ့် အနှောင့်အယှက်။
တစ်ချိန်လုံး ငါ့ဆီ လာလာနေတယ် ၊ ငါ့အကြောင်းကို အကုန်သိချင်တယ်။ ငါထင်တာက အခန်းငှားခ ပေးလိုက်ရင် ပြီးပြီထင်တာ။ ငါဘာမှမပြောစရာမလိုတော့ဘူးလို့ပေါ့။
ငါသိပြီ... ဒါကတော့ဘယ်ကောင်းမလဲနော်။ ဟုတ်လား? Fadi ကို ပြောပြီးပြီလား?
ဟင့်အင်း။ ဘယ်လိုပြောရမလဲမသိဘူး၊ သူက ငါ့ကို နေစရာရအောင် လုပ်ပေးထားတာပဲလေ၊ ငါရိုင်းသလို မဖြစ်ချင်ဘူး။
ငါ့ကို သူနဲ့ စကားနည်းနည်းပြောစေချင်လား?
လုပ်ပေးနိုင်မလား? အဲ့ဒါဆိုအရမ်းကောင်းမှာ။ ငါတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခါ ငါ သူနဲ့တွေ့ရင် တစ်ခုခုပြောလိုက်ပါ့မယ်။ ကတိပေးတယ်!
Permalink Reply by ayechanmon on October 19, 2012 at 18:48
Permalink Reply by khinthidasoe on October 20, 2012 at 17:18
Permalink Reply by ju ju on February 22, 2013 at 10:29